“Hanaovantsika Sarintany i Nizera”: Fatiman Alher · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Novambra 2013 2:46 GMT
Mahaman, Fatiman, sy Abdousalam, ireo mpianatra tamin'ny tetikasa “Sarintany ho an'i Nizera”.
Fatiman Alher no anarako, mpianatra taona fahatelo taranja jeografia ao amin'ny oniversite Abdou Moumouni ao Niamey. Mpikambana ao amin'ny Klioban'ny Mpianatra Jeografia aho ary mpandray anjara amin'ny tetikasa “Hanaovantsika Saritany i Nizera”; tamin'ny alalan'izany, nahazo traikefa momba ny tambajotra nomerika aho ary nianatra ny fomba fiaraha-mitantana tetikasa.
Mizara roa ny tetikasa “Hanaovantsika Sarintany i Nizera”: ny taotsarintany sy ny tambajotra sosialy. Mahaliana ahy tanteraka ny resaka jeografia amin'ity tetikasa ity, satria ahafahako mandray anjara amin'ny fametrahana an-tsarintany ny toetanin'ny faritra manokana misy ahy, amin'ny alalan'ity tetikasa ity, afaka niasa nidina ifotony aho miaraka amin'ny teknolojia GPS, ampiasaiko hanaovana sarintany izany, fitaovana lehibe ho an'ny mpahay toetany. Izany [asa ara-teknika] indrindra no nandrisika ahy handray anjara tamin'ny tetikasa.
Amin'ny [tetikasanay] amin'ny bilaogy, efa namoaka lahatsoratra roa aho. Ankafiziko ihany koa ny mandefa sary…Mino aho fa ny tena zava-dehibe avoakanay ao amin'izany habaka misokatra ho an'izao tontolo izao izany dia afahan'ny tsirairay mijery ny olana momba ny tsy fananan'asa ao Nizera.
Amin'ny teny frantsay no hanoratako ny lahatsoratra. Miteny frantsay amin'ireo namako Zarma, Houassa, ihany koa aho ary indraindray miteny anglisy… saingy miteny tamascheq, tenindreniko kosa aho rehefa miresaka amin'ny fianakaviako.
Ny zavatra tena tiako amin'ity tetikasa ity dia ny fandraketana an-tsarintany. Manampy betsaka ahy hametraka tsara ireo vaovao voaangona izany.
Nadikan'i Laura Morris tamin'ny teny anglisy ny resadresaka niarahana taminy tamin'ny teny frantsay.